I-China elahlwayo lephepha lendlu yangasese, i-Flushable, i-5 pack, i-250 ct ngayinye yokwakha nefektri UZhonghe
Ikhava yesihlalo yangasese elahlwayo, ephepheni, 5 iphakethe, 250 ct lilinye
IHALF FOLD STYLE-Lezi zimbozo zezihlalo zangasese ezigijimayo ziyisitayela sokugoba uhhafu ukwenza kube lula ukususa ekhadibhodini. Lokhu kubanga isidingo esincane somzabalazo nengcindezi lapho uzama ukubakhipha. Ikhava yesihlalo yangasese esilahlwayo Esivikelayo Abavikeli Besihlalo Sokuzivocavoca Amabhodlela ku-Cardboard Box Dispenser - Okwenzelwe izindlu zangasese zomphakathi Amadoda Abesifazane Abadala, amaphakethe ama-5, ama-250 ct ngakunye Inhloso yethu ukukusiza ukuthi wenze izindawo ezihlanzekile, eziphephile nezikhiqizayo.
Yenza yonke indawo yokugezela izwakale injengeyakho ekhaya ngalezi zimbozo zezihlalo zangasese ezingamaphepha ezilula kakhulu. Ngentengo eyodwa nje ephansi, ungathenga ikhava yamakhava aphelele ayi-1250. Iphakethe ngalinye lifaka izembozo zangasese ezingama-250 ngakho-ke awudingi ukuqhubeka uqalisa phansi kaninginingi.
Lezi zimbozo zezihlalo zesitayela sokugoba uhhafu zenza kube lula ukuzikhipha ebhokisini futhi zivele kalula, ngaphandle kokuzikhandla ngaphambi kokuzilahla noma ukuzihlikihla. Ngenxa yokuthi ziyaboliswa, ziyakwazi ukumboza izihlalo zezihlalo zangasese ezingeke zilimaze imvelo futhi zikunikeze ukuthula kwengqondo okuncane.
Isisindo: 14g / m2, 15g / m2, 16g / m2,17g / m2
Ukupakisha: 200pcs / ibhokisi, 25boxes / case
I-Paper pulp: i-100% i-fiber ye-virgin noma i-pulp eyenziwe kabusha
Usayizi: 425mm * 360mm, noma ngokuya ngamakhasimende funa.
Lezi zimbozo zezihlalo ezisebenza kahle zibiza ukugcina izindlu zakho zangasese zihlanzekile izivakashi namakhasimende ngentengo ephansi kangako. Futhi ungabalethela kalula amatende, imikhosi yomculo, nezindlu zangasese ezivamile zomphakathi ukuze uhlale uhlanzekile futhi uhlanzekile. Lezi zimbozo zenzelwe ukulingana kahle kuzisetshenziswa ezithengiswa ngokwehlukana. Ibhokisi ngalinye lamabhokisi wekhadibhodi liza nemiyalo ephrintiwe kuwo yokuthi ungayifaka kanjani kalula nangokuzikhandla.
* Ukupakisha Ubuningi kanye nobukhulu- Ibhokisi elilodwa nje lalembozo yezihlalo zangasese lizohlala isikhathi esiningi. Lezi zimbozo ezilula zezihlalo zangasese zephepha ziza ngepakethe lamakhava angama-250. Icala ngalinye liza namaphakethe ama-5, okwenza ingqikithi yamakhava ayi-1250 ukuze ukwazi ukuwathenga kanye futhi ahlala ebonakala ngokungapheli.
* UBUNGANI EMVELWENI- Akusekho ukwesaba ukulimaza umhlaba okuzungezile lapho konke ofuna ukukwenza ukuhlala uhlanzekile. Lezi zimbozo zezihlalo zangasese ezilungele imvelo ziyaboliseka ngokubola ngakho-ke okumele ukwenze nje ukuzilahla noma ukuzishayela. Zonakala ngokwemvelo ukuze zingalimazi imvelo.
* ISITIMU SOKUQHAQHA UHALF-Lezi zimbozo zezihlalo zangasese ezishaywayo ziyisitayela sokugoba uhhafu ukwenza kube lula ukususa kukhadibhodi. Lokhu kubanga isidingo esincane somzabalazo nengcindezi lapho uzama ukubakhipha. Isitayela sehold fold sikwenza kube lula ukuvela futhi sisebenzise ngokushesha nangempumelelo lapho kufanele uhambe.
* SEBENZISA STANDALONE NOMA LUFANELE LUKHIPHE- Iphakethe ngalinye lezembozo ezingama-250 lifika kumakhadibhodi alula wesibhakela angasetshenziswa ezimele noma angafakwa kalula kumthwali wokuthengisa ohlukile. Lezi zimbozo zenziwa ngosayizi omi kahle nokuma ukuze zingene kumshini wokufaka amathoyilethi ukwenza isitoreji nokufinyelela kube lula kunakuqala.
* IZINDLEKO NEZOKUHLANZEKA- Ngamanani aphansi kangako, lezi zimbozo zezihlalo zamaphepha ezindlini yangasese zizogcina izindlu zakho zangasese zihlanzekile futhi zihlanzekile kuzivakashi zakho nakumakhasimende akho. Futhi kumnandi ngohambo lokukhempa, ukuhamba, ukusetshenziswa kwasekhaya noma izindlu zangasese zomphakathi ukuze uhlale uhlanzekile futhi ungakhathazeki.
Ngoba iminyaka engaphezu kwengu-20, IZhonghe Paper Products Ltd. ibilokhu ikhiqiza okuhamba phambili emikhiqizweni yephepha yenhlanzeko. Amakhava ethu esihlalo sendlu yangasese nethawula lemikhiqizo yethawula liphakeme kunabo bonke abanye abasemakethe namuhla. Yonke imikhiqizo yethu yenziwe ngemicu ye-premium futhi yonke impahla yethu eluhlaza ivela kwizisetshenziswa ezisimeme. Kusuka endlunkulu yethu nasendaweni yokukhiqiza eFengcheng, eChina, sisabalalisa imikhiqizo yethu emhlabeni wonke.
Langaphambilini Umshini wePlastiki we-ABS Wall Mounted Lever
Olandelayo: Amakhava Esihlalo Sangasese, 250 AmaSpredishithi / Iphakethe, Amaphakethe ayi-20 / Ibhokisi
Amakhava Esihlalo Sezimbiza
Amakhava Esihlalo SaseRochester Midland Half-Folded
I-Scott Sanitary Toilet Seat Covers
Amathoyilethi Esihlalo Sangasese, IMIKHIQIZO YESIKHUNGO SEZindiza
OEM Factory for China Anti-Slip alahlwayo Toil ...